धर्म संस्कृती Archives - Page 91 of 104 - Purbeli News
महागुरु फाल्गुनन्दको जन्मजयन्ती भव्यताका साथ मनाइने
पाँचथर / सो¥हौँ राष्ट्रिय विभूति महागुरु फाल्गुनन्दको १३३ औँ जन्मजयन्ती भव्यताका साथ मनाइने भएको छ । विश्व किरात महासंघको संयोजनमा चार संस्थाहरुले संयुक्त रुपमा सो जन्मजयन्ती मनाउन लागेका हुन् । महागुरु फाल्गुनन्दको कर्मभूमि तथा किरात समाज सुधारका लागि उहाँले सात बुँदे सत्यधर्म मुचुल्का घोषणा गर्नुभएको स्थल लब्रेकुटिमा संयुक्त रुपमा जन्मजयन्ती मनाउ...
स्वस्थ रहन खप्तड बाबाका यी ५ सुझाव
खप्तड बाबा (वि.सं. १९३७-२०५३) ख्यातिप्राप्त आध्यात्मिक गुरु तथा विचारक हुन् । सन्न्यास लिनुअघि सामाजिक जीवनमा सक्रिय रहेका उनी चिकित्सक थिए । भारत कश्मीरको नेहरू परिवारमा जन्मिएका उनले कोलकाताबाट एमबिबिएस र बेलायतबाट सर्जनको अध्ययन गरेका थिए । पछि भने उनको झुकाव अध्यात्मतिर भयो । उनले काशी (बनारस) को दक्षिणामूर्ति मठमा रहेर पूर्वीय दर्शनको अध्ययन र...
ब्रहमाण्डमा भएका विभिन्न ग्रहको आ–आफ्नै महत्व रहेको हुन्छ । यी ग्रहहरु आफ्नो चक्रमा घुमिरहने हुँदा यसले आफ्नो स्थान परिवर्तन गरिरहेको हुनन्छ । ग्रहहरुले आफ्नो स्थान परिवर्तन गर्नुलाई घर परिवर्तन गर्नु भनिन्छ । यसले आफ्नो घर परिवर्तन गर्दा एक राशिबाट अर्को राशिमा गएर बस्ने गर्दछ । कुनै पनि ग्रह एक राशिमा एक वर्षभन्दा बढि रहँदैनन् । तर शनि ग्रहले ...
हाम्रो दिनचर्याको महत्वपूण अंग हो सुताइ । सुताइ आरामका लागि अति आवश्यक छ । मानिस मात्र होइन पशु पंछी पनि सुत्ने गर्छन् । शास्त्रमा सुत्ने पनि नियम उल्लेख गरिएको छ । यहाँ सुत्दा अपनाउनु पर्ने नियमबारे चर्चा गरिएको छ । सुताइको विज्ञान हामी जव दिनभरी काम गरेर थाक्छौं । शरीरको उर्जा कम हुन्छ । शरीरमा उर्जा कम भएपछि आराम जरुरी हुन्छ । शरीरको आरामको ला...
ज्योतिष शास्त्रले भविष्यमा हुने घटनामा वर्तमान क्रियाकलाप र घटनाले समेत प्रभाव पार्ने बताउँछ । कतिपय भविष्यमा हुने घटनाका लक्षणहरु अहिले नै देखिने समेत ज्योतिष शास्त्रको दावी छ । भविष्यमा ठूला घटना हुँदा देखिने संकेत कस्ता कस्ता ? १. दुध विहानकै दुध देख्नु शुभ मानिन्छ । दुध उम्लेर भने झनै राम्रो मानिन्छ । तर दुध उम्लेर पोखिनु चाँहि नराम्र...
द्रौपदीले कृष्णपत्नी सत्यभामालाई भनेका सुखमय वैवाहिक जीवनका ७ सुत्र
परिवारमा सुख, शान्ति बनाइ रहनका लागि द्रौपदीले कृष्णकी पत्नी सत्यभामालाई केही खास कुरा बताएकी थिइन । उनले वैवाहित स्त्रीले कुन—कुन काम गर्नु हुँदैंन । के कारणले वैवाहिक जीवनमा समस्या आउँछ । कसरी वैवाहित जीवन सुखमय बनाउन सकिन्छ भन्ने स्पष्ट रुपमा बताएकी छन् । १. द्रौपदीकाअनुसार पतिलाई आफ्नो काबुमा राख्न खोज्नु हुँदैंन । कयौं स्त्रीहरु पतिलार्इ का...
दामपत्य जीवनलाई सधैभरी अटुट बनाउन चहानुहुन्छ भने यी कुरा त्याग्नुहोस
सबै जोडीमा आफ्नो दाम्पत्य जीवन सुखद् होस् भन्ने चाहाना हुन्छ । तर नचाहाँदा नचाँहादै पनि बैबाहिक जीवन भत्किन्छ र कैयौं जोडी छुट्टिन्छन् ।विवाह टुट्ने कारण केलाउने हो भने कुनै कुनै त साह्रै सामान्य कारण समेत सामने आउँछन् । कतिपय जोडीले चाल नै पाउँदैनन् कि उनीहरुबीच के समस्या थियो ।यहाँ बैबाहिक जीवनमा समस्या आउन लागेका संकेतबारे केही टिप्स दिइएको छ । ...
तपाईको राशी कुन ? यी राशी भएका मानिस हुने गर्छन असाध्यै धनि!
बिहिबार, कार्तिक ०९, २०७४
फोर्ब्स म्यागजिनले यसपल्ट संसारका १०० जना अर्ब पतिको जन्म मिति तथा उनको राशीको अनुसन्धानबाट नयाँ कुराको खोज गरिएको छ । उनीहरुले राशीको मध्यमबाट कति जना अर्बपति छन् भनेर खोज गरेको थियो । फोर्ब्सले यो सर्वेक्षण सन् १९९६ देखि २०१५ सम्म गरेको थियो । प्रत्येक वर्षका टप १०० धनीहरूको सूचीबाट अर्बपति छानिएका थिए । शीर्षस्थानमा रहेका १०० अर्बपतिहरूको...
बिहीबार भुलेर पनि नर्गनुहाेस् यी काम
ब्रह्माण्डमा अवस्थित ९ ग्रहको गुरु मानिने बृहस्पतिको दिन मानिने बिहीबार धार्मिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । बिहीबार गरेका धार्मिक कार्यको फल तत्काल मिल्ने मानिन्छ । तर, बिहीबार केही काम गर्न भने निषेध गरिएको छ । यहाँ बिहीबार गर्न नहुने भनेर उल्लेख गरिएका पाँच यस्ता छन् : (१) कपाल नुहाउनु हुँदैन : शास्त्रमा बिहीबार कपाल नुहाउनु नहुने उल्लेख छ ।...
छठ पर्व आज, यस्ताे छ व्रतविधि
काठमाडौँ / छठ पर्वको मुख्य दिन आज साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई पूजाआरधना गरी अघ्र्य दिइँदैछ । कात्तिक शुक्ल चतुर्थीदेखि सप्तमीसम्म मनाइने सूर्यदेवको आरधना, उपासना र पूजाको यो पर्व मंगलबारबाट शुरु भएको हो । ऐतिहासिक पौराणिक ग्रन्थ महाभारतमा उल्लेख भएअनुसार द्रौपदीसहित पाँच पाण्डव अज्ञातवासमा रहँदा उक्त गुप्तवास सफल होस् भनी सूर्यदेवलाई आरधना गरिएको थियो ...